» WhatsApp/Moyo Zulu | Masked Heroes by DGMT WhatsApp/Moyo Zulu – Masked Heroes
Imibono yokuthi ungaqhuba kanjani Amaqembu Okwesekana e-WhatsApp/Moyo
Uma kuneqembu olaziyo labantu abasebenza emkhakheni wokwesekwa komphakathi, noma ongumxhumanisi (noma oweseka umxhumanisi) ohlanganyela nabasebenzi bokunakekela umphakathi, indlela eyodwa elula kodwa ebalulekile #UkubaKhona (#BeThere) ukusungula nokukhulisa inkundla yokwesekana i-Masked Heroes kuWhatsApp/Moyo (uhlelo oluyinsizakalo yezobuchwepheshe yezokuxhumana yamahhala).
Ukuqalisa: Thumela umyalezo oyimfihlo kwi-CCW ngayinye ongathanda ukuyimema eqenjini. Ngaphambi kokufaka laba bantu kunoma yiliphi iqembu, babuze kuqala ukuthi bangathanda yini ukufakwa. Kulowo mlayezo kufanele uchaze ukuthi yini inhloso yeqembu nokuthi yini engalindeleka kubo. Uma kungaba yinto elula ukwenza lokhu, ungakopisha bese unamathisela lo mbhalo ongezansi kulowo mlayezo ukuze kuqale uhlelo:
Sawubona! Ngethemba uyaphila. Ngithole inombolo yakho ku-_______ (faka imininingwane efanele). Ngiyazi kungenzeka ukuthi izinto zinzima ngempela kuwe nakulabo osebenza nabo kulo mbhedukasifo. Bengifisa ukukwazisa ukuthi ngiqala iqembu lokwesekana ngosizo lwe-WhatsApp/Moyo. Awuphoqiwe ukujoyina – kodwa futhi yindawo lapho ungakwazi ukuxhumana khona nabanye abantu okungenzeka ukuthi babhekene nezimo ezifanayo nezakho. Ungaphuma eqenjini noma nini lapho uthanda – futhi ngeke ngikubuze mibuzo ngalokho! Ngicela ungazise uma ungenankinga ngokuthi ngikufake kuleli qembu. Ivela ku _________ (igama lakho)
Uma-ke bethi bangathanda ukujoyina – yinto enhle leyo – bafake eqenjini! Uma kungenjalo, musa ukubenza bazizwe kabi ngalokho. Bazise ukuthi akunankinga neze futhi uma beshintsha umqondo ekuhambeni kwesikhathi bazobe besamukelekile ukujoyina.
Vula iqembu. Khumbula noma nini lapho ufaka abantu abasha, labo bantu abakwazi ukubona imilayezo ebhalwe ngaphambi kokuthi bajoyine, ngakho-ke kungaba yinto ephusile ukuthi ube nomlayezo wokwamukela amalungu amasha okopishiwe ozolokhu uwufaka njalo lapho umuntu omusha ejoyina iqembu. Mhlawumbe lowo umyalezo ongaba nale mininingwane:
Siyakwemukela kwi ________ (igama lendawo) Masked Heroes support group. Lena yinkundla ekhululekile nje lapho sesekana futhi sikhuthazane kulezi zikhathi ezinzima. Ukuze sinakekelane, kunemihlahlandlela nje eyisisekelo sonke okudingeka siyilandele:
Hloniphani imfihlo yomunye nomunye: Okukhulunywe eqenjini, kuhlala eqenjini!
Leli qembu limayelana nokweseka abasebenzi abanakekela umphakathi ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Sicela ungalethi izindaba ezingahlobene nalokho.
Sicela ungasiletheli izindaba mayelana nezibalo ezesabekayo nezindatshana ezethusayo. Kwanele lokhu esikubona emisebenzini yethu.
Singathanda ukuba usixoxele ngezimo ohlangabezane nazo, imicabango kanye nemizwa yakho.
Awuphoqiwe ukuthi uphendule futhi ungaphuma eqenjini noma nini.
Akuhlezi kulula ngaso sonke isikhathi ukuxoxela abangani nemindeni yethu ngalokho okwenzekayo emsebenzini, ngakho lo msebenzi udala umzwangedwa omkhulu ngezinye izikhathi. Leli qembu ngeke likuxazululele lokho kodwa ngithemba ukuthi lizoletha lowo muzwa wokuba umphakathi, ubumbano nobungani, futhi linisize nikhumbule ukuthi aninodwa.
Kukhona nezinye izinsizakusebenza ezisungulelwe ukusiza WENA lapha maskedheroes.org.za. Noma thumela nge-WhatsApp umyalezo othi “hi” ku-060 011 9999.
Qhubeka njalo: Kungenzeka ukuthi konke lokhu esikubalayo kuyinto ezenzekelayo kuwena, kepha uma kungenjalo, qhubeka ufunde! Khumbula inhloso yaleli qembu ukusiza abasebenzi abanakekela umphakathi bakwazi ukumelana nesimo. Ungakwenza lokhu ngokuthi:
ucele abantu ukuthi baxoxe “ngobuhle nobubi” balezi zinsuku (kunezinto ezinhle nezinto ezimbi ezenzekile)
uxoxe izindaba ezikhuthazayo ezitholakala ezindaweni ezinjenge-www.sagoodnews.co.za, www.goodthingsguy.com, #ImStaying.
wabelane ngezicaphuno ezikhuthazayo nama-meme atholakala lapha Inspirational caregiver quotes nalapha Quotes about being kind
wabelane ngolwazi olwenzelwe abasebenzi bezokunakekela umphakathi kuwebhusayithi yama-Masked Heroes Managing your health/ and Psychological Support
ubakhuthaze ukuthi bazinikeze imizuzu emibili bedlinza, bese besho imizwa abayizwayo. Akudingeki ukuthi bachaze ngemininingwane eminingi. Bangasho nje ukuthi, "Ngizizwa ngidangele", noma "Ngizizwa ngiphelelwe amandla okuzilawula" noma ngabe yimiphi imizwa. Bangayibhala phansi noma bayixoxele iqembu.
lapho iqembu selinesikhashana nokho likhona, ungacela abantu ukuthi baxoxe ngalokho abakwazisayo ngomunye nomunye.
ukhuthaze abantu ukuthi babhale ngalokho abahlangabezane nako. Futhi bangaxoxa izindaba zabo, nganoma yiluphi ulimi abaluthandayo lapha. Ungathola nezindaba zakwamanye ama-CCW ongabelana ngazo lapha: Stories from the frontline
Akekho umuntu olindele ukuthi uphenduke udokotela wengqondo ngakusasa. Le nkundla ayenzelwe lokho. Uma kuvela izingqinamba ezinzima ongaqeqeshelwe ukubhekana nazo, sicela uqinisekise ukuthi udlulisela i-CCW kothile ongabasiza. Chofoza lapha ukuze uthole ezinye izinsizakusebenza zokusiza ama-CCW akwazi ukubhekana nezimo futhi uthole imininingwane yokuxhumana nabe-Lifeline neye-SA Depression and Anxiety Group.
Kubalulekile futhi ukuthi uvikele impilo yakho yengqondo. Unganikeli okungaphezu kwamandla akho noma okwazi ukubhekana nakho. Yiba nomusa kuwe kanye nakuma-CCW.
Uma uthola ukuthi ingxoxo iba nzima kakhulu ukuyiphatha, ungamema abangani ukuthi bakusize ukuphatha umthwalo. Inhloso empeleni ukuthi #UkubaKhona kuma-CCW (#BeThere) – hhayi ukuwaxina ngemilayezo eyinkulungwane. Bathinte njalo ezinsukwini ezimbalwa ngokubathumela i-meme enhle, isicaphuno esikhuthazayo, izindaba ezikhulisayo, noma ukuqhuba ingxoxo nje nako kwanele.
Uma kuvela izindaba ezibalulekile ocabanga ukuthi kudingeka kwabelwane ngazo (ngemvume yomnikazi wendaba) sibhalele lapha info@maskedheroes.co.za, noma wabelane ngendaba ezinkundleni zokuxhumana usebenzisa amagama athi #MaskedHeroesSA nalawa athi #BeThere)